न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न : यो विषय संवैधानिक हो कि हाेइन भनेर इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन ?
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिटबारे संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । यतिबेला मुद्दाको प्रतिवादी पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हायर गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले इजलासमा आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् ।
भट्टराईले भने, ‘यो संविधान आइसकेपछि अदालतबाट यस संविधानको विषयमा नजिर आएको छैन । त्यसैले पुराना संविधानका विषय अहिलेको लागि ध्यानाकर्षण हुन सक्छन् । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘यो विषय संवैधानिक हो कि हैन भनेर यो इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन र ? यतै राख्ने कि अरू इजलासमा पठाउने अधिकार छैन ?’
भट्टराईले यो संविधान आइसकेपछि अदालतबाट संविधानको विषयमा नजिर नआएकोले पुराना संविधानका व्यवस्था हेरेर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्नेसमेत बताए ।
भट्टराईले भने, ‘अहिलेको संविधानको विषयमा नजिर नआएकोले पुराना संविधानका विषय अहिलेको लागि आकर्षित हुन्छन् ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७, १२:०६:००